Daraasado kiis |
Baakadaha Taariikhda Sucuudiga
Mashiinnadayada baakadaha kuleylka kuleylka leh ayaa sidoo kale aad loogu fadilay suuqa bartamaha-bari ee timirta tubta. Baakadaha taariikhaha ayaa codsi sare u leh sameynta mashiinka. Waxay ubaahantahay in la hubiyo in baakad kastaa si hufan oo xoog leh loo sameeyay si loo qaado taariikhaha miisaanka kala duwan. Taariikhaha xirmada ...
Baako Mareykan ah
Mashiinnadayada baakadaha ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa alaabada dareeraha ah (semi). Aqoonsiga tikniyoolajiyadeena, soo saare subag Mareykan ah wuxuu soo iibsaday 6 mashiin 2010, wuxuuna amraa mashiinno dheeri ah 4 sano kadib. Ka sokow shaqada joogtada ah ee sameynta, shaabadaynta, goynta, ...